भत्काऊ साहित्यका सीमा - कोसेली - कान्तिपुर समाचार
यो निबन्ध कसरी लेखियो ? किन लेख्न प्रेरित भएँ ? त्यसपछिल्तिर एउटा कथा छ । तपाईंलाई त्यतातिर लैजान्छु । साउन १६ गते शनिबार, ‘फरकधार’ अनलाइनमा पाका आख्यानकार नयनराज पाण्डेको एउटा अन्तरवार्ता छापिएको थियो । अन्तरवार्ताको शीर्षक थियो, ‘अग्रजलाई सम्मान गर्नुस्, तर तिनले तोकिदिएको सीमा भत्काउनुस् ।’
रसुवाका तामाङ हिमाललाई ईश्वर मान्छन् । लाङटाङ लिरूङ उनीहरुका निम्ति लिरूङ गेङेन अर्थात् प्रेमालु ईश्वर हुन् । उनीहरु मान्छेका ग्रहदशा हिमालको अग्लो ठाउँबाट बहने हावा र खोच हुँदै बग्ने नदीले बगाएर लैजान्छ भन्ने विश्वास गर्छन् ।
पदयात्री सुन्दरताको खोजीमा मात्र हुँदैनन् । जसरी संस्कृति सभ्य/असभ्य हुँदैन, त्यसरी प्रकृति पनि सुन्दर/कुरूप हुँदैन, मात्र भिन्न हुन्छ, विविध हुन्छ ।
चैत्र १४, २०७७ रोशन शेरचन
ख्वप : खुला विश्वविद्यालय२०७७ कात्तिक ६ । भक्तपुर (ख्वप) नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतीसँग भेटेँ । उद्देश्य थियो– नगरपालिकाको जैविक विविधतासम्बन्धी कार्यक्रमबारे जानकारी लिनु । प्रतीक्षा–कक्षको ठूला बोर्डमा टाँसिएका फोटाहरूमा भक्तपुरको जात्रापर्वको तस्बिर, दरबार स्क्वायरको सांस्कृतिक भव्यता अनुभव गरेँ । चाड मनाइरहेको रैथाने नेवारी समुदायको अनुहारको भावमा बेग्लै आभा देख्न सकिन्थ्यो । त्यो भक्तपुरको मौलिक अनुहार थियो । सत्य भन्छु, प्रतीक्षा कक्षमै म प्रभावित भएँ ।
मेयर आएपछि भित्र पसेँ । सामान्य परिचय दिई आफ्ना प्रश्न राखेँ । मेयरका अनुसार, ख्वपःलाई सांस्कृतिक सहरका रूपमा विकास गर्न कार्यक्रम र बजेट बढी छुट्ट्याइएको रहेछ । वन–क्षेत्र यस पालिकामा न्यून रहेछ । प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, मौलिक शैलीको निर्माण र जीर्णोद्धार, सीप तालिम, फोहोर मैला व्यवस्थापन आदि छन् ।
ख्वपःको पुरानो क्षेत्र, जो सम्पदा–बस्तीका रूपमा चिनिन्छ, त्यसको चार किल्ला तोकेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार, सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गरिएको रहेछ । काठका कलात्मक झ्याल, टुँडालहरू राख्न नगरपालिकाले ३५ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेको बुझियो । सम्पदा क्षेत्रमा कसैले वातावरणसँग नमिल्दो कंक्रिट संरचना बनाउन पाउँदैन । ‘अगाडिको मोहडापाटाका घरहरूले जीर्णोद्वारमा मौलिक सामग्री र शैली प्रयोग गर्न अधिकतम् पाँच लाखसम्म अनुदान लिएका छन्,’ मेयर बताउँछन् ।
काठमाडौंको रानीपोखरीमा पानी अड्याउन परम्परागत ज्ञान र सीप भएका कर्मीहरू ख्वपःबाट नै गएको थाहा भयो । सांस्कृतिक पुरातात्त्विक सम्पदालाई नकारात्मक असर पार्ने विकासलाई निषेध गर्ने इच्छाशक्ति ख्वपःमा देखियो । ठाउँअनुसारको मौलिक वास्तुकला, स्थापत्य, जीवनशैली, स्थानीय चाडपर्व र रैथाने परिकारको स्वाद नभए सांस्कृतिक पर्यटनको महत्त्व नै के भयो र ?
मल्लकालीन पोखरीहरूको पुनर्निर्माण र व्यवस्थापन अर्को प्राथमिकता रहेछ । तर, यही उपत्यकामा काठमाडौं महानगरपालिका भने कमलपोखरीमा कंक्रिटको कमल फुलाउन उद्यत छ । कस्सो, सम्पदा अभियन्ताहरूले त्यसलाई रोके । चारै कुना स–साना पोखरी र बीचमा कंक्रिटको कमल राख्ने, यो भद्दा योजना थियो । त्यसमा त सजीव कमलका फूल पो फुलाउने हो । सम्पदा संरक्षणमा एउटा सिद्धान्त छ– कमभन्दा कम संरचना बनाउने (मिनिमम इन्टरभेन्सन प्रिन्सिपल) । विगतमा त्यहाँ कमल फूल फुलेकाले नै त्यसको नाम कमलपोखरी भएको बुझ्न निधारको मुजा गाँठो पारिरहनु पर्दैन । नामको नेपथ्यमा सदैव इतिहास हुन्छ । काठमाडौंको नेतृत्वले खुलामञ्चमा सटर बनाएर, रानीपोखरीको अघिल्लो डिजाइनमा र कमलपोखरीको जीर्णोद्धारमा पटक–पटक बदनियत देखाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरलाई शैक्षिक भ्रमणका लागि भक्तपुर लैजानु उचित हुन्छ । शैक्षिक भ्रमण स्कुल र क्याम्पसमा मात्रै सीमित गर्नुहुन्न । सम्पदा संरक्षणका निम्ति ख्वपः खुला विश्वविद्यालय रहेछ ।
प्रकृति पूजा, खुवालुङ–कथा
इन्द्रधनु सादृश्य मान्छेका आस्थाका अनेकन् आयाम छन् । पुज्नु मान्छेको ऐतिहासिक उद्भवसम्म जोडिएको विषय होला । कोसौं पर कन्दमूल र सिकार खोज्न भौंतारिनुपर्ने कालमा (हन्टर ग्यादरर) मान्छेका दुई प्रमुख शत्रु थिए । हिंस्रक वन्यजन्तु र प्राकृतिक विपत्ति । हिंस्रक वन्यजन्तु रहस्यकै वृत्तमा थिए । मानवजातिले प्रकृतिको गति र नियमको भेउ पाउन सकेका थिएनन् । प्राकृतिक नियमबारे समझ नहुँदा विपत्तिमा स्वयंलाई सुरक्षित राख्ने हेतुले मानव पुर्खाले प्रकृतिलाई अनुष्ठानमार्फत मनाउनतिर लागे । प्रकृति अर्थात् खोलानाला, कुण्ड, गुफा, ओढार, डाडाँकाँडा, देउराली, वनजंगल, ढुंगा, भीरपहरा, रूखपात आदि । प्रकृतिको पूजा गरेर प्रकृति–पूजकले त्यसबाट बल र शक्ति प्राप्त गर्छन् । बोनपो (प्रिबुद्घिस्ट) पुरापुर प्रकृति पूजक हुन् ।
२०७६ मंसिरमा कुलपूजाका निम्ति म मुस्ताङ पुगेँ । झन्डै बाइस वर्षपछि कुलपूजा भएको थियो । बोन आधारित झाँक्री परम्परालाई (सामानिज्म्) नजिकैबाट नियालेँ । मेरो बाजेबराजु झाँक्री थिए । उनीहरूले वाचन गर्ने मन्त्र सुनेँ । दशकौं नखोलिएको सन्दुकबाट पूजासामग्री निकाली तीन बजे बिहान स्युउ–स्युउ गर्दै पाँच भाइले कालीगण्डकीको चिसो पानीले पखाल्यौं । कपडाले पुछेर पूजासामग्रीलाई तोरीको तेलले टल्कायौं । पूजासामग्री प्रकृतिजन्य थियो– शालिग्राम, धुपी र सल्लाको हाँगा–पात, जनावरको हाडखोर, काठका टुक्रा आदि । शालिग्राम केवल कालो–चिल्लो ढुंगा थिएन । धुपी केवल रूखको हाँगा थिएन । हाडखोर केवल जीवाश्म थिएन । कालीगण्डकी फगत नदी थिएन । त्यो अनुष्ठान परिवारका निम्ति आफ्ना पूर्वजसम्म जोडिने सेतु थियो ।
यही फागुन ८ गते विराटनगरबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खुवालुङ ढुंगा फुटाएर भए पनि पानी जहाज चलाउने विचार व्यक्त गरे र पालिकाले खुवालुङ फुटाउने बजेट छुट्ट्याएको खबर दियो । ओलीको विचार र पालिकको खबरले किराती समुदायमा स्वाभाविक आक्रोश उब्जाएको छ । भाषाविद् डा. तारामणि राईका अनुसार, भोट–बर्मेली वा टिबेटो वर्मन भाषाअन्तर्गत पर्ने किरात–राईहरूको दर्जनौं भाषा भए पनि ती सबैमा ‘खु’ र ‘वा’ ले पानी भन्ने अर्थ राख्छ भने ‘लुङ’ भन्नाले ढुंगा बुझिन्छ । तमोर, अरुण र दूधकोसीको संगमस्थलमा रहेको खुवालुङ, जुन किरातीहरूको आस्थाको केन्द्र रहेछ, त्यसलाई फुटाएर पानी जहाज चलाउने सपना खेदजनक छ । यस्तो ‘निरो सपना’ ले सम्पदा संरक्षणको मर्मलाई न्याय गर्दैन । खासमा गर्नुपर्ने थियो– किराती सभ्यता र मन्धुम मिथकसँग जोडिएको यो प्राकृतिक थलोलाई प्रवर्द्धन गर्दै सांस्कृतिक पर्यटनको विकास । युगौंसम्म समुदायको आद्यबिम्ब बन्न सकेकाले, सामूहिक सांस्कृतिक मानसलाई निर्देश गरेकैले त्यो लोकको कथा–आस्था (कथास्था) बनेको हो ।
नेपालमा अनगिन्ती मिथक छन् । रसुवाका तामाङहरू हिमाललाई ईश्वर मान्छन् । लाङटाङ लिरुङ उनीहरूका निम्ति लिरुङ गेङेन (प्रेमालु ईश्वर) हुन् । मान्छेका ग्रहदशा हिमालको अग्लो ठाउँबाट बहने हावा र खोच हुँदै बग्ने नदीले बगाएर लैजान्छ भन्ने विश्वास गर्छन् (पर्यटन विकासमा धर्मसंस्कृति, पूर्वा तामाङ) । त्यस्तै मगर समुदायमा बराह ताल महत्त्वपूर्ण छ । बराहमा कुण्ड, माछा र वरपर वन हुन्छ । म्याग्दीका मगरहरू पूजाका निम्ति पाउदारमाथिको खयरबराह जान्छन् । साथै उनीहरूका निम्ति रिदी खोलाको भिन्नै सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्व छ (संरक्षणविद् कमल थापासँग अन्तर्वार्ता) ।
खुवालुङ पूर्वी नेपालको एउटा प्रतिनिधि मिथक हो । प्रतिरोधी अभियानमा सहभागी आदिवासी जनजाति लेखक महासंघका संयोजक लेखक राजन मुकारुङ, कवि चन्द्रवीर तुम्बापोलगायतका लेखक, अभियन्ता र विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले खुवालुङ बचाऊ अभियानलाई अघि बढाएका छन् । यस अभियान खुवालुङमा प्रकट हुन पुग्यो, कारण किरातीहरू प्रतिरोधी चेतनाले बढी सुसज्जित छन् तर सारमा यो प्रकृति पूजक समुदायकै अभियान हो । उनीहरूको संयुक्त उद्घोष हो– सांस्कृतिक अपनत्वको । र, सम्पदाविरोधी विकास सोचविरुद्धको । यस अभियानमा सम्पूर्ण प्रकृति पूजक समुदायको सहभागिता र ऐक्यबद्धता आवश्यक छ ।
पवित्र प्राकृतिक थलो, बेयुल कथा
पवित्र प्राकृतिक थलो (नेचरल साक्रेड साइट) बारे पछिल्ला वर्षमा संरक्षणविद्, अध्येता, अभियन्ता र अनुसन्धानकर्ताको चासो असाध्यै बढेको छ । परम्परागत ज्ञानप्रणाली र सीपबारे व्यवस्थित अध्ययन र अनुसन्धानले तीव्रता पाएको छ । आईयूसीएन, डब्लूडब्लूएफजस्ता संस्थाले पवित्र प्राकृतिक थलो र रैथाने समुदायले जैविक विविधता संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानको अन्तरसम्बन्धमा विशद् अध्ययन थालेका छन् । आईयूसीएनको संरक्षित क्षेत्रको सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विषयमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले पवित्र प्राकृतिक थलोलाई परिभाषित गर्ने क्रममा भनेको छ, ‘जमिन वा पानी भएका त्यस्ता क्षेत्रसँग मानिस वा समुदायको विशिष्ट आध्यात्मिक सम्बन्ध छ ।’ संरक्षित क्षेत्रको जैविक विविधताका साथै सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्त्व छ भन्ने विषय अब नयाँ रहेन । बरु प्राकृतिक र सांस्कृतिक कुन हदसम्म र कस्ता कारणको अधीनमा रही अन्योन्याश्रित छन्, त्यो चासोको विषय बनेको छ । थोरै समाज निरीक्षण गर्ने हो र सहज ज्ञान नबिर्सने हो भने त्यो सम्बन्ध प्रस्ट देख्न मुस्किल छैन ।
पहिलो उदाहरण नेपालमा सामुदायिक वन, साझेदारी वन, राष्ट्रिय वन, धार्मिक वन, कबुलियती वन र मध्यवर्त्ती वनका मोडल कायान्वर्यनमा छन् । धार्मिक वनजति पूर्णतः संरक्षित वन सायदै अरू होला । स्थानीय वा आदिवासी समुदायसँग यसको सांस्कृतिक–आध्यात्मिक सम्बन्ध भएकाले यसको संरक्षण भएको हो । अन्य मोडलमा वन विनाशका घटना नौला छैनन् । झन्डै १५० वर्षअघि स्थापना भएको विश्वको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज अमेरिकाको एलो स्टोनभन्दा अघि कुनै क्षेत्र संरक्षित थियो भने त्यो पवित्र प्राकृतिक थलो नै थियो, जसलाई विश्वभरिकै तत्तत् स्थानका स्थानीय, रैथाने, कविला, रेडइन्डिएन वा आदिवासी जनजातिले संरक्षण गरेका थिए ।
डब्लूडब्लूएफमा काम गर्दा सन् २०१० मा भुटानमा प्रकृति र संस्कृति विषयको गोष्ठीमा सहभागी हुने मौका मिलेको थियो । गोष्ठीमा नेपाल, भारत, भुटान, स्विट्जरल्यान्डका सहभागी थिए । बौद्ध गुरु, रिम्पोचे र टुल्कुका साथै स्वतन्त्र अध्येता पनि थिए । मेरो निम्ति त्यो दुई दिन प्रकृति र संस्कृतिको सूक्ष्म सम्बन्ध बुझ्ने थलो बन्यो । धर्महरूले प्रकृतिलाई कसरी बुझ्छन् ? प्रकृति धार्मिक अनुष्ठान, मन्त्र र ईश्वरका वाहनहरूमा कसरी प्रकट (मेनिफेस्ट) हुन्छ ? आदि विषयमा विशद् छलफल भयो । तिब्बेतन बुद्धिज्मको आधारभूत ज्ञान नभएको मलाई धेरै विषय बुझ्न कठिन भयो । तर, के भेउ पाए भने त्यो विशाल संसार रहेछ ।
गोष्ठीमा बेयुलबारे पनि थाहा पाएँ । तिब्बेतियन बौद्धमार्गीबीच बेयुल वा पेमाकोको अवधारणा सदियौंदेखि प्रचलनमा छ । आठौं शताब्दीमा गुरु पद्मसम्भव (गुरु रिम्पोचे) पुगेका हिमालका दुर्गम ल्यान्डस्केपमा आदिवासी समुदायबीच के विश्वास रहेछ भने त्यस्ता भूमि पवित्र र जैविक विविधताले धनी हुन्छन् । त्यहाँ अनिकाल, रोगव्याधि लाग्दैन, अनिष्ट हुँदैन । खुम्बु क्षेत्र त्यस्तै बेयुल रहेछ । त्यसैले त्यहाँ अहिंसाको पालना गरिन्छ । सन् २००९ मा नाम्चे जाँदा प्रख्यात पर्यटकीय गन्तव्य भएर त्यहाँ मारकाट नगर्ने बरु लुक्लाबाटै डोकोमा मासु ओसोरेको देखेँ । रोल्वालिङ, नुब्री अन्य बेयुल रहेछ । बौद्ध, हिन्दु, बोन्पो र जैन धर्मावलम्बीकै सांस्कृतिक धरोहर कैलाश पर्वत त बेयुलकै पनि केन्द्र मानिन्छ ।
पर्यटनको बिर्सिइएको पाटो
अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनाको कर्मचारी हुँदा पर्यटकसँग निकै कुराकानी भइरहन्थ्यो । फिल्ड स्टेसन घोरेपानी थियो । एकपटक उपल्लो मुस्ताङको पदयात्रा गरेको फ्रेन्च पदयात्रीलाई सोधेँ– कस्तो लाग्यो उपल्लो मुस्ताङ ? उसले भन्यो, ‘इट इज डिफरेन्ट ।’ अमेजिङ, ब्युटिफुल त्यस्तो केही भनेन । फ्रेन्च टुरिस्ष्टको जवाफ सुनेपछि अचम्म लाग्यो । पदयात्री सुन्दरताको खोजीमा मात्र हुँदैनन् भन्ने थाहा पाएँ । जसरी संस्कृति सभ्य/असभ्य हुन्न, त्यसरी प्रकृति पनि सुन्दर/कुरूप हुन्न । मात्र भिन्न हुन्छ । विविध हुन्छ ।
खुवालुङ ढुंगा फोर्न यति बजेट छुट्ट्याइएको छ भन्नेले बरु त्यस थलोलाई सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास र प्रवर्द्धन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । धार्मिक–सांस्कृतिक पाटो पर्यटनमा प्रकृतिजत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । रह्यो पानीजहाजलाई ठाउँ पुगेन भन्ने कुरो । विज्ञान र प्रविधिको युगमा खुवालुङलाई यथास्थानमा रहन दिई पानीजहाजलाई आवतजावत गर्ने मार्गको खोजी गर्न सम्भव छैन भनेर कसरी पत्याउने ?
त्यस संगमस्थलमा पानीजहाजमा भरिभराउ यात्रुलाई तालिमप्राप्त सम्पदा गाइडले खुवालुङनजिकै आइपुग्दा त्यसको इतिहास र सांस्कृतिक महत्त्वबारे माइकबाट जानकारी गराइरहेको दृश्य ! पर्यटकहरू दंग परेर सुनिरहेको ! र, खुवालुङ आफ्नो नाम जसरी नै कालान्तरसम्म पानीको ढुंगो भइबसेको ! आहा, कति सुन्दर हुन्छ कल्पना !
प्रकाशित : चैत्र १४, २०७७ १०:२६